सन्तान अमेरिकामा, हजुरआमा पशुपतिको वृद्धाश्रममा ! – Agrimpost
मुख्य पृष्ठसमाजसन्तान अमेरिकामा, हजुरआमा पशुपतिको वृद्धाश्रममा !
काठमाडौं। ठिक छ वर्षअगाडि इन्द्रकुमारी रिजालले आफ्ना ‘मालिक’ गुमाइन् । त्यसपछि उनको जीवनबाट हाँसो गुम्यो । जीवन उजाड भयो । त्यसपछि उनी पशुपतिनाथको शरणमा आइन् । अब बल्ल उनको ओठमा कहिलेकांही हाँसो देखिन थालेको छ । केही समयअघि पशुपतिनाथ मन्दिरको छेवैमा रहेको वृद्धाश्रम पुग्दा इन्द्र कुमारी विगतमा फर्केर टोलाइरहेकी थिइन् । उनको ब्लडप्रेसर जाँच गर्न आएका केही स्टाफ नर्स नजिकै थिए ।तीनैमध्ये एकलाई इन्द्रकुमारीले सोधिन्, ‘नानी तिम्रो बिहे भयो ?’ कोठाभर हाँसो गुन्जियो । इन्द्रकुमारीले जवाफ पाइन्, ‘यति छिटो ?’
‘मालिकको पनि सम्झना छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँसँग बिताएका क्षणहरु, घुमेका ठाउँहरुको सम्झना छ ।’ यी सब सम्झनाहरुलाई उनी दैनिक वृद्धाश्रममा रहेका अन्य वृद्धवृद्धाहरुसँग बाँडिरहेकी हुन्छिन् । अनि अधिकांश समय भजनकिर्तनमा नै दिन्छिन् । ‘अब त यहाँकै साथीहरु हामी एक अर्काका साहरा हौँ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो जीवनका अनेक कुराहरु हामी बाँड्छौँ ।’ त्यसो त आफ्नै रहरले वृद्धाश्रममा बस्न थालेकी हुन् इन्द्रकुमारी । त्यसैले पनि बेलाबेला उनका छोरी तथा नातिनीहरु बारम्बार उनलाई भेट्न आइरहेका हुन्छन् । ‘अस्ती मात्रै पनि अमेरिकाबाट आएकी नातिनी मलाई भेट्न आएकी थिइ,’ उनले भनिन्, ‘छोरीहरु पनि भेट्न आउँछन्, आफ्नो घर जाम भन्छन् ।’ ‘किन उनीहरुको घरमा गएर म बोझ बनूँ ?’ इन्द्रकुमारीको प्रश्न छ ।
सुत्केरी हुन आएकी महिलाको शल्यक्रिया गर्दा मृत्यु
अब कक्षा २ सम्मका बच्चालाई होमवर्क दिन नपाईने
अस्पतालको लापर्वाहीले १७ वर्षीया किशोरीको ज्यान गयो
बेहुलाबेहुलीलाई चार लाख रुपैयाँको नोटको माला